क्यानाडा को लागी एक भिसा को लागी कसरी आवेदन गर्ने? - ALinks
अमेरिकीहरू, मेक्सिकोहरू, र धेरै उच्च आय भएका देशहरूका अन्य मानिसहरू (तलको सूची हेर्नुहोस्) क्यानाडा भ्रमण गर्न भिसा आवश्यक पर्दैन; यसको सट्टा, तिनीहरूले इलेक्ट्रोनिक यात्रा प्राधिकरण (eTA) प्राप्त गर्नुपर्छ जुन प्राप्त गर्न सकिन्छ अनलाइन। अरू सबैलाई क्यानाडा प्रवेश गर्न भिसा चाहिन्छ। तपाईंले आफ्नो बायोमेट्रिक्स, जसमा तस्विरहरू र फिंगरप्रिन्टहरू समावेश छन्, तपाईंको स्थानीय क्यानाडाली वाणिज्य दूतावासमा पेश गर्न आवश्यक हुनेछ। जब तपाइँ तपाइँ तपाइँको बसाई भरि तपाइँ आफैलाई समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाइँ तपाइँको भिसाको अन्त्यमा क्यानाडा छोड्ने बलियो कारणहरू छन् भनेर देखाउन सक्नुहुन्छ, तपाइँलाई एक प्रदान गरिनेछ।
धेरै जसो विदेशीहरु, जो काम गर्न वा क्यानाडा मा अध्ययन गर्न चाहान्छन्, एक काम वीजा वा एक अध्ययन भिसा को लागी आवेदन गर्न को लागी आवश्यक छ। तपाइँ यो लगभग सबै अनलाइन गर्न सक्नुहुन्छ, फेरी तपाइँ मात्र तपाइँको बायोमेट्रिक्स दिन को लागी, कि फोटो र औंलाछाप छ। क्यानाडा मा, तपाइँ एक काम बिना पहिलो एक काम भिसा को लागी आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ।
के तपाइँ क्यानाडा जान को लागी भिसा चाहिन्छ?
यदि तपाइँसँग संयुक्त राज्य बाट पासपोर्ट छ भने तपाइँलाई months महिना को लागी क्यानाडा आउन को लागी भिसा को आवश्यकता छैन।
तपाइँलाई months महिना को लागी क्यानाडा आउन को लागी भिसा को जरुरत छैन, तर, यदि तपाइँ हवाई बाट क्यानाडा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाइँलाई एक इलेक्ट्रोनिक यात्रा प्राधिकरण (ईटीए) को आवश्यकता पर्नेछ, जब तपाइँ बाट पासपोर्ट छ।
कुनै पनि युरोपेली संघका देशहरु, अन्डोरा, अष्ट्रेलिया, बहामास, बारबाडोस, ब्रुनेई, चिली, ह Hongक Kong, आइसल्याण्ड, इजरायल, जापान, लिकटेंस्टीन, मेक्सिको, मोनाको, न्यूजील्याण्ड, नर्वे, पापुआ न्यू गिनी, सामोआ, सान मारिनो, सिंगापुर, सोलोमन टापु , दक्षिण कोरिया, स्विट्जरल्याण्ड, ताइवान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम, भ्याटिकन सिटी।
एक इलेक्ट्रोनिक यात्रा प्राधिकरण (ईटीए) सजीलै अनलाइन प्राप्त गर्न सकिन्छ यहाँ आधिकारिक क्यानेडियन सरकार वेबसाइट मा, उनीहरुसँग धेरै भाषाहरुमा स्पष्टीकरण छ।
अरु सबैलाई भिसा चाहिन्छ र यसको लागि अनलाइन आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। तपाइँ लगभग सबै चीज अनलाइन गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाइँ तपाइँको बायोमेट्रिक्स तपाइँको निकटतम क्यानेडियन वाणिज्य दूतावास लाई दिन आवश्यक छ।
तपाइँ आफ्नो भिसा आवश्यकताहरु मा पनि जाँच गर्न सक्नुहुन्छ क्यानाडा सरकार को वेबसाइट। तिनीहरूको वेबसाइट मुख्य रूप बाट अंग्रेजी र फ्रेन्च मा छ, तर केहि धेरै उपयोगी पृष्ठहरु अन्य सामान्य भाषाहरुमा छन्।
तपाइँ यहाँ तल जाँच गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँ क्यानाडा भ्रमण गर्न भिसा चाहिन्छ। शीर्ष मा ड्रपडाउन सूची मा तपाइँको पासपोर्ट नागरिकता छान्नुहोस् र पहेंलो भिसा आवश्यकताहरु बटन मा क्लिक गर्नुहोस्।
मा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ क्यानाडा सरकारको वेबसाइट, भिसा को प्रकार को लागी तपाइँलाई चाहिन्छ। तपाइँ लगभग सबै कुरा अनलाइन गर्न सक्नुहुन्छ तर, तपाइँको राष्ट्रीयता र तपाइँलाई चाहिने भिसा को प्रकार मा निर्भर गर्दछ, तपाइँ तपाइँको बायोमेट्रिक दिन को लागी तपाइँको निकटतम क्यानेडियन वाणिज्य दूतावास मा जानु पर्ने आवश्यकता हुन सक्छ, त्यो तपाइँको फोटो र औंलाछाप हो।
यो क्यानाडा सरकारको वेबसाइट तपाइँ तपाइँको भिसा को लागी आवेदन गर्न को लागी दुई फरक तरीकाहरु प्रदान गर्दछ:
अनलाइन आवेदन गर्नुहोस् वेबसाइट को अनलाइन फारम को उपयोग गरेर,
कागजमा आवेदन फारम भर्नुहोस् र अन्य कागजातहरु संग एक साथ पेश गर्नुहोस्।
क्यानेडियन भिसा प्रकार
यी सबै प्रकारका भिसाहरु मोटो रुपमा दुई वर्गमा विभाजित छन्। यी कोटिहरु तपाइँ भिसा आवेदन प्रक्रिया को एक आधारभूत हाइलाइट प्रदान गर्दछ र यो सजिलो बनाउन को लागी तपाइँ तपाइँको सबै कागजातहरु लाई ठीक संग तैयार गर्न को लागी। यहाँ क्यानाडा भिसा को प्रकार हो:
अस्थायी भिसा: आगन्तुक भिसा, विद्यार्थी भिसा, र work भिसा,
स्थायी निवास भिसा: स्थायी निवास, व्यापार आप्रवासी भिसा, र एन्ट्री प्रोग्राम भिसा।
तपाईंले एउटा छनौट गर्नुपर्दछ जुन तपाईं क्यानाडा जान चाहानुहुन्छ भन्ने उचित हुन्छ।
भिसा आवेदन शुल्क के हो?
देखाइएको रकम क्यानेडियन डलर (CAN$) मा छन्।
अध्ययन अनुमति (विस्तार सहित)
कार्य अनुमति (विस्तार सहित)
कार्य अनुमति - प्रदर्शन कलाकार र तिनीहरूका कर्मचारीहरूको समूहको लागि अधिकतम शुल्क
आगन्तुक भिसा - एकल प्रविष्टि वा बहु प्रविष्टिहरू (विस्तारहरू सहित)
आगन्तुक भिसा - परिवारको लागि अधिकतम शुल्क
आगन्तुक रेकर्ड (विस्तार सहित)
यदि तपाईंको क्यानाडामा अध्यागमन स्थिति पछिल्लो 90 दिन भित्र समाप्त भएको छ भने, तपाईंले पुनर्स्थापनाको लागि आवेदन दिनुपर्छ र CAN$200 पुनर्स्थापना शुल्क तिर्नु पर्छ।
तपाईं आफैंमा क्यानाडाई भिसाका लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ Canada.ca तर यदि तपाईंलाई आफ्नो भिसा आवेदनको साथ मद्दत चाहिन्छ भने तपाईं भरपर्दो भिसा सेवा मार्फत जान सक्नुहुन्छ VisaHQ or आईवीसा.
तपाईंको राष्ट्रियता र समयको आधारमा, यी तलका भिसा सेवाहरू मध्ये एउटा अर्को भन्दा बढी सुविधाजनक वा प्रभावकारी हुन सक्छ।
आईवीसाको साथ क्यानाडाली भिसाका लागि आवेदन दिनुहोस्
भिसाएचक्यूको साथ क्यानाडाली भिसाका लागि आवेदन दिनुहोस्
क्यानाडाली भिसा प्राप्त गर्नका लागी के आवश्यकताहरु छन्?
यी आधारभूत आवश्यकताहरु हुन् कि सबैलाई पार गर्न को लागी जब उनीहरु एक आगन्तुक भिसा को लागी आवेदन गरीरहेका छन्। यी आवश्यकताहरु सामान्यतया काम वा अध्ययन भिसा को लागी लागू हुनेछ।
तपाइँसँग एक वैध यात्रा कागजात छ, उदाहरण को लागी, एक पासपोर्ट।
तपाइँ स्वस्थ हुनुहुन्छ।
तपाइँसँग एक आपराधिक रेकर्ड छैन।
तपाइँ क्यानाडा छोड्नुहुनेछ जब तपाइँको भिसा समाप्त हुन्छ।
तपाइँसँग रहनुहुँदा आफैंलाई समर्थन गर्ने साधन छ।
तपाइँ आफ्नो घर देश को लागी महत्वपूर्ण बन्धन छ र तपाइँ फिर्ता जान चाहानुहुन्छ।
क्यानाडाली सरकारले यो अपेक्षाकृत सजीलो बनाउन को लागी बनाएको छ कसरी एक क्यानाडा भिसा प्राप्त गर्न। उनीहरुले आवेदकहरुको योग्यताको मूल्या assess्कन गर्ने विभिन्न परीक्षणहरु बनाएका छन्। तपाइँ केहि प्रश्नहरुको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ भिसा को प्रकार को आधारमा तपाइँ चाहानुहुन्छ। त्यस पछि, परीक्षण तब तपाइँलाई थाहा छ कि तपाइँ आवेदन दिनु पर्छ कि पर्दैन। उनीहरूले तपाइँलाई सान्दर्भिक निर्देशनहरु पठाउनेछन् कि तपाइँ सबै आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्न को लागी लिनु पर्छ।
यहाँ केहि कागजातहरु छन् कि क्यानाडा भिसा को लागी आवश्यक हुन सक्छ:
क्यानाडा भिसा आवेदन फारम,
क्यानाडा भिसा शुल्क को प्रमाण,
फोटो र औठाछापहरू क्यानाडा भिसा को लागी आवश्यकताहरु अन्तर्गत,
वित्तीय साधन को प्रमाण,
प्रमाण छ कि एक पटक क्यानेडियन भिसा समाप्त हुन्छ, तपाइँ तपाइँको घर देश फर्किनुहुनेछ,
नागरिक स्थिति कागजात,
क्यानाडामा बस्ने कसैबाट निमन्त्रणा पत्र।
अनुप्रयोग अस्वीकृत हुन सक्दछ यदि:
यदि तपाइँ प्रमाणित गर्न असफल हुनुहुन्छ कि तपाइँसँग क्यानाडा मा तपाइँको समय को समर्थन को लागी पर्याप्त पैसा छ,
भिसा अधिकारीहरुलाई शंका छ कि तपाइँ मात्र अध्ययन वा काम वा क्यानाडा मा यात्रा गर्न जाँदै हुनुहुन्न,
भिसा अधिकारीहरु लाई शंका छ कि तपाइँ तपाइँको भिसा को overstay गर्न जाँदै हुनुहुन्न,
यदि तपाइँ एक मेडिकल परीक्षा पास गर्नुहुन्न यदि त्यो आवश्यक थियो।
क्यानाडाको भिसा लिन कति समय लाग्छ?
इलेक्ट्रोनिक यात्रा प्राधिकरण (eTA) ले केही मिनेट मात्र लिनुपर्छ। क्यानेडियन भिसा प्रशोधन समय प्रत्येक विशिष्ट केसको लागि फरक हुन्छ, तर यसले सामान्यतया केही हप्ता लिन्छ। तपाइँको भिसा अधिकारीहरु तपाइँको आवेदन र तपाइँको बायोमेट्रिक्स प्राप्त गरे पछि मात्र प्रक्रिया शुरू हुन्छ। तपाईं जाँच्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रशोधन समय को लागी।
म कसरी क्यानाडा को लागी एक अध्ययन भिसा प्राप्त गर्न सक्छु?
पहिले, तपाइँ एक विश्वविद्यालय, वा एक सिकाउने संस्था, कि तपाइँ भर्ना हुनेछ पत्ता लगाउन आवश्यक छ। पछि, तपाइँ एक क्यानेडियन अध्ययन अनुमति प्राप्त गर्न आवश्यक छ, जो तपाइँको बसाई को अवधि को लागी एक क्यानेडियन विद्यार्थी भिसा को रूप मा कार्य गर्दछ। यदि तपाइँसँग क्यानाडाली अनुसन्धान लाइसेन्स छ, वा यदि तपाइँ तपाइँको पढाई पुनः सुरु गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ यसलाई क्यानाडा भित्र बाट नवीकरण गर्न को लागी आवेदन दिन सक्नुहुन्छ।
क्यानाडा सरकारको वेबसाइटमा, तपाईंले अध्ययन अनुमतिको लागि अनलाइन वा कागजी आवेदन मार्फत आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। अध्ययन अनुमति प्राप्त गर्न सम्भावित आवश्यकताहरूको लागि माथि हेर्नुहोस्।
क्यानाडा मा एक स्थायी भिसा कसरी प्राप्त गर्ने
तपाईं क्यानाडामा स्थायी भिसाको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। तपाईंले आफ्नो कामको अनुभव र शिक्षाले तपाईंले बस्न चाहेको ठाउँलाई फाइदा पुग्न सक्छ भनी देखाउन आवश्यक छ। तपाइँ तपाइँको परिवार को एक सदस्य संग पुन: मिलन को लागी अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाइँ यो पनि प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँ क्यानाडा मा एक सफल व्यवसाय सुरु गर्न वा जारी राख्न सक्षम हुनुहुनेछ।
तपाइँ स्थायी बसोबास को लागी आवेदन गर्न को लागी पहिलो जागिर खोज्न को लागी आवश्यक छैन। यो संग शुरू गर्नुहोस् क्यानाडा सरकार उपकरण तपाइँको विकल्प को आकलन गर्न र कसरी तपाइँको आवेदन शुरू गर्न को लागी बुझ्न को लागी।
स्थायी निवासी (पीआर) स्थिति प्राप्त गरेपछि, तपाइँ प्रमाणको रूपमा एक पीआर कार्ड पाउनुहुनेछ। यो कार्ड देखाउन को लागी जब तपाइँको राहदानी संगै क्यानाडा को लागी तपाइँको बाटो यात्रा गरीरहेको छ। स्थायी निवासी स्थिति तपाइँलाई विभिन्न अधिकारहरु जस्तै दिन्छ:
क्यानाडाली नागरिकहरूले गरेका अधिकांश सामाजिक सुविधाहरूको लागि तपाईं हकदार हुनुहुन्छ।
प्रत्यक्ष, अध्ययन, वा क्यानाडा मा कहीं पनि काम।
साथै, स्थायी रेसिडेन्सी प्राप्त गरेपछि, तपाईंले सबै करहरू तिर्नु पर्छ र सबै क्यानाडाको कानूनहरू पालना गर्न आवश्यक छ।
यद्यपि त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन स्थायी बासिन्दाहरूले गर्न सक्दैनन्:
उनीहरुसँग मतदान गर्ने अधिकार छैन वा उनीहरु राजनीतिक कार्यालयमा खडा हुन सक्दैनन्।
तिनीहरूसँग केहि रोजगारहरू हुन सक्दैनन् जुन उच्च स्तरको सुरक्षा निकासीको आवश्यक पर्दछ।
आवरण छवि विन्डसर, क्यानाडा मा छ। द्वारा फोटो हर्मेस रिवेरा on Unsplash
क्यानाडा भिसाक्यानाडाली भिसाक्यानाडाको लागि भिसा कसरी प्राप्त गर्नेस्थायी भिसाअस्थायी भिसा
जर्मनी पर्यटक भिसा कसरी प्राप्त गर्ने?
केन्या को लागी भिसा कसरी प्राप्त गर्ने?
भारतीयहरुको लागि दुबई भिसा
अक्टोबर 31, 2020
क्यानाडा बाट घाना को लागी एक भिसा कसरी प्राप्त गर्ने?
सिंगापुरबाट टर्कीको लागि यात्रा
ट्युनिसियालीहरु को लागी भिसा बिना देशहरु